WP eCommerce; Ihe mgbakwunye WordPress maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
WP eCommerce; WordPress ngwa mgbakwunye maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Na WordPress WP eCommerce ngwa mgbakwunye, ị nwere ike mfe wuo ma jikwaa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ntanetị, ọbụlagodi na ị maghị banyere ya. Ọ bụ ihe gbasara a eCommerce ngwa mgbakwunye maka WordPress, nke pụtara apụ maka ịnye ọtụtụ ọrụ, akụrụngwa na atụmatụ, ebumnuche iji kwado azụmahịa kọmputa, n'agbanyeghị ụdị ngwaahịa a na-ere.
Maka ndị na-ebido ebido, nke a ecommerce ngwa mgbakwunye Ọ na-abịa na ọtụtụ modulu ịzụta, yana a na-enyekwa nhọrọ mbupu mpụga site na UPS, USPS, yana nyiwe ndị ọzọ n'efu. Ndị ọrụ nwekwara ike ịhọrọ n'etiti dị iche iche ịkwụ ụgwọ nyiwe, gụnyere PayPal, PayPal Express, n'ụzọ dị otú ahụ na usoro ịkwụ ụgwọ niile dị mfe maka ndị ahịa.
Ọbụghị naanị nke ahụ, ngwa mgbakwunye ahụ na-abịa na a onye isi ụtụ, n'ezie, ọ nwere otu n'ime usoro nchịkwa ụtụ isi siri ike nke usoro azụmahịa kọmputa ọ bụla. Usoro a nwere nkwado maka ọtụtụ klas ụtụ isi, yabụ maka ndị na-ere ahịa ọ na-anọchite anya ya ụzọ dị mma ma dị irè iji merie nsogbu ụtụ isi.
Akụkụ ọzọ maka gosipụta ngwa mgbakwunye a maka Ecommerce Ọ bụ ngalaba ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi, nke na-arụ ọrụ na API enweghị atụ, echiche ahịa dị elu, yana ngwaọrụ dị iche iche na ohere ịbupụ data na faịlụ CSV. Ọ nwere ikike ịmepụta akụkọ ma ọ bụ akụkọ maka azụmahịa kọmputa, na mgbakwunye na ikwe ka mbipụta akwụkwọ ọnụahịa, ọnọdụ nhazi, yana ijikwa n'ụzọ zuru ezu ngwakọ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Yana n'elu, ngwaahịa nwere ike na-egosipụta na-akpaghị aka ekele ya mwekota na Ntọala Google, Nchịkọta Google na ekele maka nhazi ya, ị nwere ike ree ụdị ngwaahịa ọ bụla ị bu n’obi. Nke ahụ bụ, ọ bụ Ecommerce ngwa mgbakwunye dị njikere ma dabara maka ụdị azụmahịa ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » WP eCommerce; WordPress ngwa mgbakwunye maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Otu esi eme nke ọma site na ecommerce uwe
Ihe 5 ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ Bochum maka eCommerce